10 Ama-Scenic villages eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Ama-Scenic villages eYurophu
Amazwe amakhulu aseYurophu awumsuka wezinganekwane eziningi nezinganekwane, imvelo emangalisa nemizana egcina izimfihlo zasendulo. Eduze kwamadolobha amakhulu asemkhathini noma agxunyekwe ngemuva kwezintaba ze-limestone, inani lemizana ebukekayo nenhle eYurophu ayipheli. Nokho, bangu 10 amadolobhana amahle eYurophu onobuhle nomlingo wakhe ngaphezu kwabo bonke abanye.
Izitimela kuyindlela enobungane kakhulu imvelo uvakashe. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Gcina Isitimela, I Amathikithi Eshibhile kakhulu Amathikithi Esitimela Emhlabeni.
1. Bheka, Switzerland
Idolobhana elihle kakhulu eSwitzerland, I-Guarda iyidolobhana, itholakala phakathi kwezihlahla eziluhlaza okotshani. Ngaphezulu kwengxenye yesigodi sase-Engadin, noma njengoba abantu bendawo beyibiza kanjalo, U-Engiadina ubusa ukubukwa okukhulu kwamaSwitzerland. Yakhelwe ethafini elangeni, 300 amamitha ngenhla kwesigodi, ukuqapha konke okuzayo nokuzayo, kanye namasiko asendulo njengokuxosha ubusika kude.
Amakhaya amhlophe ahlotshiswe ngemidwebo yendabuko futhi imibhalo yasendulo ebizwa nge- sgraffiti. I-Romah, ulimi lwendawo, lokho okusindile futhi kusakhulunywa nanamuhla.
I-Basel to Chur ngeSitimela
UBern ukuya eChur ngesitimela
Turin kuya kuTirano ngesitimela
Bergamo kuya kuTirano ngesitimela
2. Ama-Scenic villages eYurophu: Cochem, Germany
Umuzi olala osebeni lomfula iMoselle. Izindlu eziphethwe uhhafu nezindlu ezinhle kakhulu emigwaqweni emincane. Kuhle ekuweni, lapho imifino eluhlaza nezihlahla zigqoka impahla yazo yegolide, enezela ekubukeni okuhle nokubukeka okuhle kweCochem enhle.
Sizungezwe izivini namagquma, Idolobhana laseCochem lilungile ikhadi leposi. Indlela enhle yokuzwa idolobhana bese uthwebula yonke imibono yendawo ebukekayo ngebhayisekili.
UFrankfurt kuya kuCochem ngesitimela
Bonn to Cochem ngesitimela
I-Cologne kuya ku-Cochem ngesitimela
Stuttgart to Cochem ngesitimela
Phakathi kwamawa amawa, osebeni lomfula iMeuse, kuhlala idolobhana elihle leDinant esifundeni saseWallonia. Isimo sezulu sezulu esinamandla, ebusika, noma entwasahlobo, lo mzana omncane ubukeka umangalisa ngokuphelele kunoma yisiphi isimo sezulu nesikhathi sosuku. Ukubukwa okuhle kukhona okuhle kunabo bonke kusuka eCarlith cliff-top.
I-dome ye-Collegiale Notre-Dame De Dinant iyisici esivelele ngemuva kwezintaba ze-limestone emnyama. Izindlu ezinemibala nezikebhe ngaphambili, Qedela ukubukwa okumangazayo.
Uma unesikhathi esengeziwe, vakashela iDolobha laseCrevecoeur eliseduze, Izingadi ze-Annevoie, kanye ne-Chateau de Veves ngokubukwa okuningi okufana nekhadi leposi.
IBrussels to Dinant ngeSitimela
I-Antwerp kuya ekudleni kwesitimela
I-Ghent to Dinant ngeSitimela
Liege to Dinant ngeSitimela
4. Ama-Scenic villages eYurophu: UNorcia, Italy
Ngemuva kwezindonga ezivikelayo, phakathi kwamagquma aluhlaza, e-East Umbria, uzothola indawo enhle yeNorcia. Lo mzana wenkathi ephakathi muhle futhi ubukeka umangalisa impela ngesikhathi sentwasahlobo lapho izindawo ezizungezile ziqhakaza ngamathoni anemibala.
Amasonto, Izigodlo zase-Italy, engeza ekubukeni okuvusayo kweNorcia. Futhi, umfula iNera ungenye indawo ongayihlola futhi ukujabulela ukubukwa okumnandi wesifunda esihle sase-Umbria e-Italy. Endleleni qiniseka ukubheka ama-truffles adumile, nokunambitha okudla kwasendaweni kwe-spaghetti noma i-frittata enama-truffles. Kungokwaphezulu!
5. Smooth, Abase Netherlands
Uma uhambela eHolland uyohlwitha amasimu we-epic tulip, bese uvakashela iLisse ebabazekayo. Lo muzi omuhle kangaka nje 45 amaminithi kude ne-Amsterdam.
ILisse mhlawumbe ingelinye lamadolobhana amancanyana eNetherlands, kepha kusekhaya 7 izigidi zezimbali zezimbali ezitshalwa unyaka nonyaka kuKeukenhof Gardens. Kusukela ngasekupheleni kukaMashi kuya maphakathi noMeyi, lezi zinhlamvu ziyaqhakaza zibe ama-tulips amahle futhi anemibala. Ngakho, Ngokungangabazeki uLiss unothando kunabo bonke entwasahlobo futhi ulungele ezinye izibhamu nokubukwa okungalibaleki.
6. Ama-Scenic villages eYurophu: St. UGilgen, Austria
Wonke umuntu uyazi imilingo Hallstatt, kodwa i-Austria iyikhaya lamadolobhana amaningi amahle. Enye yamadolobhana amahle kakhulu eYurophu itholakala e-Austria. St. Isigodi sakwaGilgen sasihlala ekhaya lomndeni wakwaMozart, futhi idolobhana lihlala osebeni lweLake Wolfgang.
Ungahlola isigodi ngezinyawo noma ibhayisekili, noma emotweni ekhebula. Uma ungesabi ukuphakama, khona-ke ukubukwa okuvulekela emotweni ikhebula kuzokususa ngokoqobo umoya wakho. Imibono emihle yalelidolobhana ibisikhuthazo esivela kubaculi baseViennese.
I-Munich eya kwi-Salzburg ngeSitimela
IVienna kuya eSalzburg ngeSitimela
I-Graz eya kwi-Salzburg ngeSitimela
I-Linz to Salzburg ngeSitimela
7. St. Amagesi, France
Ikhaya le-French Delicacies Foie Gras kanye nama-truffles, isigodi esincane saseSt. IGenius 2 amahora ukusuka eBordeaux. Lokhu kuqinisekisa izivini ezithandekayo ezizungeze, lapho ungajabulela khona ingilazi yewayini elihle njengoba uthandeka emzaneni omuhle kanye nasemaphandleni.
St. Genies Village izici zethu 10 amadolobhana amahle aseYurophu sibonga izindlu ezifulelwe ngamatshe. Ngaphezu kwalokho, the 12th-century church and 13th-century castle are right in the center of the village. Umgwaqo ovunguzayo uzothatha idolobhana lonke kanye nezindlu zalo zamatshe ezinemibala emnyama kuya ekubukeni okuhlaba umxhwele kakhulu neziza.
St. Genies sibonisa isimo inganekwane France ubusisiwe nge. Ungajabulela ubuhle bendawo uhambo lwesitimela kulo lonke elaseFrance.
8. Ama-Scenic villages eYurophu: I-Bibury, England
Izindlu zembobo zamatshe ezinophahla lwamatshe olubunjiwe olunamamitha aluhlaza ezungezile yikho okwenza i-Bibury ibe ngelinye lamadolobhana amahle kakhulu eYurophu. Qiniseka ukuhamba phansi e-Arlington Row, umugqa omuhle kakhulu nezihlwitha ezinhle.
Ukuhamba kuzokusa emuva ngqo empilweni yangekhulu le-17 eBibleury. Idolobhana elihle kakhulu eNgilandi lihlala osebeni loMfula uColn. Lokhu kwake kwaba indawo enhle kakhulu yokulengisa uboya kusuka kumakamelo abaluki. Amazwe e-Bibury afanelekile i epikinikini yantambama noma ukuhamba ekuseni kakhulu ngaphambi kokuba izixuku zezivakashi ziphazamise ukuthula kwaso nezikhathi zokulala.
9. ILindau EGermany
Idolobhana laseLindau lisemngceleni we-Austria neGerman, eJalimane laseBavaria. Ngenye yezifunda ezinhle kakhulu ze ukuwa amaholide eYurophu. Ogwini lweLake Constance, eyaziwa nangokuthi iBodensee, lo muzi empeleni uyiphenathi, ngebhuloho elixhumanisa phakathi kwezwe nesiqhingi.
Imibono embalwa ebukekayo emzaneni ingumgwaqo iMaximilianstrasse, indlu yokukhanyisela yakudala yekhulu le-13, futhi Idolobha Elidala, Altstadt.
ULindau ukhona igugu elifihlekile eJalimane nasemzaneni sikufanele ngokuphelele ukuvakasha kwakho ohambweni lwakho olulandelayo. Kukhona izitimela ze-Eurocity ezivela eMunich, Zurich, noStuttgart.
IBerlin iya eLindau ngesitimela
IMunich eya eLindau ngesitimela
Stuttgart eLindau ngesitimela
IZurich iya eLindau ngesitimela
10. Ama-Scenic villages eYurophu: I-Czech Krumlov, I-Czech Republic
UNESCO amagugu wezwe isayithi, Idolobhana laseCesky Krumlov eBohemia liyinhlanganisela yeRenaissance, Gothic, kanye nokwakhiwa kweBaroque. Ihlukaniswe ngumfula iVltava, ICesky Krumlov ingenye yemifula enhle kunazo zonke eYurophu. Isimo sezindlu emabhange anemvelo enhle ngemuva ingeminye yemibono emangalisayo eYurophu. Kungaleso sizathu uCesky Krumlov ekithi 10 izindawo ezinhle zaseYurophu.
Kunconywe kakhulu ukukhuphukela esigodlweni seCesky Krumlov ngephaneli engalibaleki yeCesky Krumlov, Umfula iVltava, kanye nemvelo enhle ezungeze isifunda saseBohemia.
Ama-Scenic villages eYurophu
Imizana embalwa emincane kakhulu eYurophu ifihlwe kude nezixuku zezivakashi ezintabeni ezinkulu. Lawa magugu afihliwe angahle abukeke angafinyeleleki, kepha ngobuchwepheshe banamuhla, basondele kunangaphambili. Ungakwazi yonke imizana nge ezokuthutha zomphakathi, ohambweni lwesitimela olufushane kulo lonke elaseYurophu. Emahoreni ambalwa kuphela ungazulazula, ukuvuma nokuhlwitha izithombe zalezi amasiko kanye nemibono efihliwe.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizokujabulela ukukusiza uthole amathikithi ashibhile eshibhile aya kunoma iyiphi yale mizi ebabazekayo eYurophu.
Ingabe ufuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi “10 Ama-Scenic villages eYurophu”Kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/ ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
ubuhle obuhle beautifulvillageseaurope Fairytaletowns scenicvillageseurope amadolobhana